Su'aalaha Badiya La Weydiiyo - TurboMedia.io
Sideen u bilaabaa isticmaalka TurboMedia.io?
Si aad u bilowdo, waa inaad marka hore guji "LOGIN / REGISTER" badhanka midigta sare, ama guji "Adeegyada Bixiyaha" ee barta toolbar ee ku yaal dusha sare haddii aad iibsaneyso adeegyo badan sida Followers, Likes, Views and Comments. Waxaa markaa lagaa doonayaa inaad gasho oo aad iska diiwaangeliso aag xubnaheedka TurboMedia. Si aad tan u sameyso waxaad si fudud u gelineysaa magaca isticmaale ee Instagram-ka oo guji batoonka “LOGIN” cagaaran. Ka dib waxay kuu geyn doontaa meesha xubinta ka ah. Daaqad cusub ayaa soo bixi doonta Waad ku mahadsan tahay inaad iska diiwaangelisay TurboMedia.io oo aan kaa codsado inaad siiso cinwaanka emaylkaaga si uu kuugu soo diro ogeysiisyada iyo cusboonaysiinta akoonkaaga. Si fudud u bixi emaylkaaga, oo guji batoonka "Gudbi Email" ah. Fadlan Ogsoonow: Ma helno macluumaadkaaga akhbaartaada ama aanad heleyno koontadaada Instagram. Looma baahna inaad bixiso fure aad isticmaasho koontadaada Instagram. Waxaa lagaa rabaa inaad xisaabiso xisaabtaada si aad u isticmaasho adeegyadayada. Markii aad gasho xariirka xubinta, waxaa laguugu soo bandhigayaa Qorshooyin Kala Duwan oo Kala Duwan iyo Qorshooyin Kala Soco Kala Duwan oo loo adeegsado liiska hoos udhigida Likes iyo Followers. Iyada oo ku xidhan baahiyahaaga gaarka ah iyo baahiyahaaga, waxaad go'aansan kartaa inaad la raacdid mid ka mid ah Qorshayaasha Bilaashka ah, ama ujro yar oo bil kasta ah, waxaad raacdaa Qorshe Bixsan oo kuu oggolaanaya inaad hesho adeegyadeena oo aan waxba lagaa soo celin.
Barta Instagram waa aalad muhiim u ah dad badan maanta maanta da 'ahaan. Kordhinta Asxaabtaada iyo / ama Jeceshahayba waxaa la cadeeyay inay kordhineyso jiritaankaaga internetka, dalabyada iibka, kaa caawiso inaad ogaato iyo waxyaabo aad u badan. Haddii aad si fudud u jeceshahay inaad kordhiso waxqabadka xisaabtaada shakhsiga ah ama aad tahay xirfadle leh hadaf gaar ah u leh bartaada Instagram, annaga oo ah TurboMedia waxaan ku siin karnaa koritaan macquul ah oo waara oo lagu daboolo baahiyahaaga. Instagram-ka ayaa leh inka badan 200 Milyan oo qof oo adeegsanaya adeeggooda Warbaahinta Bulshadu waa wax walba isla markaana Instagram waa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee lagu kordhiyo soo-gaadhistaada waxkastoo ay tahay inaad sameyso! Nala soo xiriir annaga oo xisaabtaada u qaadno heerka xiga!
TurboMedia.io miyay nabdoon tahay isticmaalka xisaabta Instagram
Dabcan! Waxaan nahay adeeg aamin ah oo aamin ah oo ay adeegsadaan macaamiisha in kabadan 100,000, iyo koreyso. Sirtaada iyo amnigaaga ayaa ah mudnaanta koowaad ee 1, waana sababta aan u horumarinay nambar si aad ah u xoogan oo aan ku ilaalinay shabakada adoo adeegsanaya sirta 256-bit. Anaga HA YEELIN waxay ubaahan tahay Instagram Password, oo aanad haysanin wax koontada Instagram ah.
Ma waxaad heli kartaa macluumaad ku saabsan xisaabta Instagram xisaabta?
MAYA! Marka aad u qorto adeegeena ma weydiisan karno ereygaaga Instagram, ama aad u baahatid mid ka mid ah macluumaadkaaga login. Waxaan u baahannahay kaliya magacaaga adeegga Instagram si aad u ogaatid meesha aad u dirto adeegyada. Wax kale oo dheeraad ah!
Ma bedeli karaa magacayga Instagram inta adeegga lacagta la bixiyo?
Haddii aad go'aansato inaad beddesho magacaaga Instagram inta aad ka helayso adeegyada TurboMedia.io adeegyadu way joogsan doonaan ka dib marka magaca la beddelo. Waxaa lagugula talinayaa inaad ilaaliso isticmaale-magaca aad ku qortay muddada qorshahaaga. Haddii aad rabto inaad bedesho magacaaga isticmaale si fudud ugu noqo TurboMedia.io oo aad qorshahaaga mar labaad ku iibsato magacaaga cusub, oo email noogu soo dir risiidka oo kugula taliso inaad magacaaga ka beddeshay sidii ay ahayd wixii uu hadda ahaan jiray. Ka dib waan baabi'in doonnaa qorshihi hore oo waxaan kuu soo celin doonaa maalmihii aan la isticmaalin.
Ma awoodi karaa inaan xisaabteyda Instagram ka dhigo mid gaar ah?
Si aan u isticmaalno adeegyadeena, waxaan kaa rabnaa inaad u oggolaato koontadaada Instagram inay noqoto mid Dadweynaha ah. Haddii aad adeegsaneyso mid ka mid ah adeegyadeena billaha ah ee keenaya Raacista iyo / ama Jeceshahay maalin kasta, tani waxay kaaga baahan tahay inaad xajiso Akoonkaaga Dadweynaha inta qorshahaaga socdo. Haddii aad dooratid 1 ka mid ah Adeegyada Meheraddayada (Kuwa La Socotada, Jaangooyada, Muuqaallada, Faallooyinka) waxaad si fudud uga dhigi kartaa koontadaada mid dadweyne waqtiga amarkaaga ka dibna marka amarkaagu dhammaado, ku soo celi Khaas ahaan.
Qorshaha Socdaalka ee 6 FREE
10 Qorshayaasha Raacista ah ee Bilaashka ah ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho 10 Raacid ah 24 saac gudahood adoo dhammaystiraya 90 Sahan Labaad (haddii shabakaddeenu ogaato inaad u qalanto) ama dhammaystirto 1 tallaabo bulsheed fudud haddii aadan u-qalmin sahanka. Markaad riixdo batoonka "Dhaqdhaqaaqa" ee ka hooseeya Qorshaha Aasaasiga ah, daaqad ayaa soo bixi doonta oo kaa codsan doonta inaad dhammaystirto sahanka. Dhagsii batoonka buluuga ah ee dhahaya “Halkaan Guji Si Aad U Dhameysato Sahan Degdeg ah”. Haddii aad u-qalanto sahamintu way soo bixi doontaa oo waad bilaabi kartaa. Haddii aadan u-qalmin daaqadda ayaa is-beddelaya oo ku weydiisan doona inaad dhammaystirto 1 Tallaabada Bulshada iyadoo la adeegsanayo Facebook iyo / ama Google +. Markii aad si guul leh u dhammaystirto 90 Baadhitaan labaad, ama aad dhammaystirto 1 Tallaabada Bulshada ayaa qorshahaaga la hawlgelin doonaa. Waxaad si dhakhso ah u heli doontaa Raacayaasha 10 illaa inta koontadaadu tahay PUBLIC oo dhameystirtay sahaminta ama ficilada bulshada iyo koontadaada ayaa leh "Activated". Kadib saacadaha 24, waxaa laguugu soo diri doonaa boosteejo waxaana laguu oggolaan doonaa inaad ku soo noqotid si aad dib ugu noqotid geeddi-socodka oo aad u heshid 6 More followers.
Qorshayaasha Macaamilka Usbuucle ah ee Usbuucyada (Lacagta Bisha Hore)
Qorshooyinka Toddobaadka Toddobaadka ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho Dadka raacsan 7da maalmoodba si otomaatig ah, adigoon u baahnayn inaad dhammaystirto 90 Baadhitaan Labaad ama dhammaystirto Waxqabadka Bulshada. Markaad iibsato, waa lagaa dhammeeyaa! Qorshayaasha Toddobaadka Toddobaadka ah ayaa si otomaatig ah 100% si otomaatig ah u shaqeeya, marka dib ayaad u fadhiisataa, u degeysaa oo aad u fiirsataa xisaabtaada Instagram oo kordhisa usbuuc kasta xawaaraha dabiiciga ah adigoon marna booqan TurboMedia mar labaad! Fadlan ogow inaad bilaabi doonto taageerayaashaada kaddib marka lacagtaada lagu soo iibsado qorshaha. Bixinta waxay markaas ku celin doontaa maalmo kasta 7 laga bilaabo taariikhda aad iibsatay. Waad joojin kartaa qorshahaaga wakhti kasta, iyada oo aan wax lacag ah lagaa joojin.
20 Qorshaha Ciyaaraha ee Free
Qorshaha 20-ka Bilaashka ah ee bilaashka ahi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku hesho 20 Likes 24 saac gudahood adoo dhammaystiraya 90 Sahan Labaad (haddii shabakaddeenu ogaato inaad u qalanto) ama dhammaystirto 1 tallaabo bulsheed fudud haddii aadan u-qalmin sahanka. Markaad riixdo batoonka "Dhaqdhaqaaqa" ee ka hooseeya Qorshaha Bilowga, daaqad ayaa soo bixi doonta iyaga oo kaa codsanaya inaad buuxiso sahanka. Gali URL boodhka aad rabto inaad jeclaan karto in lagu dabaqo ka dibna riix batoonka buluuga ah ee dhaha "Halkaan Guji Si Aad U Dhameysato Sahan Degdeg ah". Haddii aad u-qalanto sahamintu way soo bixi doontaa oo waad bilaabi kartaa. Haddii aadan u-qalmin daaqadda ayaa is-beddelaya oo ku weydiisan doona inaad dhammaystirto Tallaabada Bulshada adigoo adeegsanaya Facebook iyo / ama Google +. Markii aad si guul leh u dhammaystirto 90 Baadhitaan labaad, ama aad dhammaystirto 1 Tallaabada Bulshada ayaa qorshahaaga la hawlgelin doonaa. Waxaad isla markiiba heli doontaa 20 Wuxuu jecel yahay inta uu koontadaada yahay KOOWAAD oo dhameystiray Sahanka ama Waxqabadka Bulshada iyo koontadaada ayaa leh "Activated". Ka dib markii saacadaha 24 dhamaystiran, waxaa laguu soo diri doonaa emailed waxaana loo oggol yahay in uu ku soo noqdo si uu kuugu soo celiyo habka oo u helo 20 dheeraad ah oo jecel.
Qorshooyinka Qiimaha Qorshaha ee Qaadashada ah (Lacagta Lacag Bil walba)
Qorshayaasha Jecel Heerka Tooska ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ka hesho Likes illaa 3 sawir / fiidiyoo fiidiyoow ah maalin kasta 15 daqiiqo ka dib markii aad toos u dhajiso, adigoon dhammayn 90 Sahan Labaad ama dhammaystir 5 Tallaabooyin Bulsheed. Markaad iibsato, waa lagaa dhammeeyaa! Qorshayaasha Nidaamka Mashiinka Jecel ee Bilaashka ah ayaa si otomaatig ah 100% u shaqeeya, markaa waad iska fadhiisataa, is degeysaa oo aad fiirsataa boggagaaga Instagram oo ay ka helaan Likes mar kasta oo aad dhejiso adigoon waligaa booqan Mr. Insta. Fadlan ogow inaad bilaabi lahayd inaad jeceshahay 15 daqiiqadaha ka dambeeya boostadaada dambe. Waad joojin kartaa qorshahaaga wakhti kasta, iyada oo aan wax lacag ah lagaa joojin.
Sidee baan u kansali karaa qadarkayga lacag-bixinta?
Markaad iibsato mid kasta oo ka mid ah qorshooyinka isdiiwaangalinta ee la bixiyo waxaa si otomaatig ah laguugu dallici doonaa isla maalinta bil kasta. Haddii waqti uun aadan u baahnayn rukhsaddaada TurboMedia, si fudud noogu soo dir farriin adoo adeegsanaya annaga Taageero Bogga oo waxaan xisaabin doonaa xisaabtaada si ay u dhacdo. Lacala ganaax la'aan ama kharash qarsoon, HADDII!
Goorma ayaan heli doonaa amarkeyga?
Amarrada oo dhan waxaa lagu siin doonaa saacadaha 24-72 ee waqtiga aad iibsaneyso. Caadi ahaan, amarkaaga wuxuu bilaaban doonaa wax yar ka dib marka aad dhammaysato bixinta, laakiin waxay kuxirantahay tirada adeegyadda aad dalbatay, waxaa laga yaabaa in lagu faafiyo wakhtiga 24-72 saacada saacada si loo xaqiijiyo dhalmo buuxda.
Adeegyadan ma heli doonaan xisaabtarka warbaahinta bulshada?
Xaqiiqo maaha! Dhamaan adeegyadayadu waa 100% badbaado ah waxaana loo dhiibay qaab si loo hubiyo inaysan jirin wax khuseeya adeega Bulshada.
Adeegyadan ma dhigi doonaa faalladayda?
Waxaan gaarsiinaa adeegyada ugu tayada sareeya ee laga heli karo internetka. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira dhibic. Tani waa nooca warshadaha. Ma jiro adeeg la heli karo oo aan mararka qaarkood dareemi doonin hoos u dhac. Sababtaas awgeed, waxaan marwalba u soo gudbineynaa si aan u hubinno in ka dib marka waxoogaa hoos loo dhigo, wali laguugu hadhi doono wax ka badan wixii aad ku amartay. Marka laga hadlayo waxyaabaha la jecel yahay, aragtida iyo faallooyinka, kuwaa dhif ayey hoos u dhacaan. Haddii ay dhacdo in dhibicdu dhacdo, si fudud email noogu soo dir rasiidka aad iibsatay waxaanan hubin doonnaa inaad isla markiiba kor u kacdo. Waxaan gadaal ka taaganahay waxaan bixinno waxaan rabnaa inaan kaa caawino sidii aad ula kulanto yoolalkaaga Social Media!